China L-Phenylalanine CAS 63-91-2 yeParamma Giredhi (USP) vagadziri uye vanotengesa | Honray
Chigadzirwa Chigadzirwa :: L-Phenylalanine
L-Phenylalanine (Yakapfupikiswa Phe) yakakosha amino acid uye ndiyo chete fomu ye phenylalanine inowanikwa mumapuroteni. Iyo ndeimwe ye18 yakajairika amino acids, uye imwe yeasere akakosha amino acids panyama yemunhu.
Sekuwedzera kwekudya zvinovaka muviri, L-phenylalanine inogona kutaridzika sebenzyl boka rinotsiviwa neboka re methyl re alanine, kana boka re phenyl panzvimbo yeiyo terminal hydrogen ye alanine. Kazhinji mumuviri ne phenylalanine hydroxylase catalysis oxidation mu tyrosine, uye synthetic ne tyrosine yakakosha maurotransmitter nemahomoni, kutora chikamu mumuviri metabolism yeshuga uye mafuta metabolism.
L-phenylalanine ndeye bioactive inonhuhwirira amino acid. Iyo inodikanwa amino acid iyo isingakwanise kuve yakazvigadzira-yega nevanhu nemhuka. Izvo zvinodikanwa kuti munhu atore 2.2g L-phenylalanine mazuva ese. Seimwe yeasere anodiwa amino acids yemuviri wemunhu, yanga ichishandiswa zvakanyanya mukugadzira mishonga uye chikafu chinowedzera indasitiri. Icho chinhu chakakosha cheamino acid jekiseni. Muindasitiri inogadzira chikafu, L-phenylalanine inogona kuwedzerwa muzvikafu zvebheka. Uye chikafu che phenylalanine chinogona kukwidziridzwa uye neamido-carboxylation ine glucide.
L-phenylalanine inogona kusimudzira chikafu chinonhuwira uye chengetedza muyero weanodiwa amino acids. Muindasitiri yemishonga, L-phenylalanine inoshandiswa seiri pakati pevamwe amino anticancer mishonga yemishonga yakadai se formylmerphalanum uye nezvimwewo. Inoshandiswa zvakare kugadzira adrenalin, thyroxin uye melanin. Chimwe chiitiko chakakosha kusanganisa aspartame neL-aspartic acid.
L - phenylalanine ndiyo yakakosha mbishi yezvakakosha chikafu chinowedzera - chinotapira Aspartame (Aspartame). Seimwe yeakakosha amino acids mumuviri, L-phenylalanine inonyanya kushandiswa kweamino acid kuwedzerwa uye amino acid zvinodhaka muindasitiri yemishonga.
Machena machena kana crystalline poda
Pashure: L-Leucine CAS 61-90-5 YeChikafu Giredhi (AJI USP)
Zvadaro: L-valine CAS 72-18-4 yeFarm Giredhi (USP)
Pharm Giredhi L-Leucine, L-Threonine Pharm Giredhi, L-Threonine Chikafu cheGiredhi, Kudya Kwemhuka, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine,